Halyey Tony Adams Oo Kula Taliyey Mikel Arteta Inuu Beddelo
Africa’s Covid-19 demise toll nears 40,000 – newest updates
Golaha Shacabka BFS oo maanta u codeynaya Xukuumadda RW
Wada-shaqeynta Xeer-illaalinta & Maxkamadaha oo gaartay meel
By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 18, 2020
Halyeygii Arsenal ee Tony Adams ayaa usoo jeediyey tababaraha kooxdaas ee Mikel Arteta inuu isbeddel ku sameeyo shaxdiisa kaddib guul-darradii ay shalay kala soo laabteen Manchester City oo ay ugu tageen Etihad Stadium.
“Aniga Iyo Hooyadaaba Waan Kugu Hanweyn Nahay Waana Kugu
Waa Kuwan Xiddigaha Goolasha Ugu Badan Kasoo Dhaliyey
Tony Adams ayaa dhalleecayn u jeediyey hab-difaacista laacibka reer Spain ee Hector Bellerin kulankii City ee shalay.
Mikel Arteta ayaa ku ciyaaray shax ka koobnayd 3-4-3 oo uu awoodda saaray khadka dhexe, laakiin Adams ayaa rumaysan in Thomas Partey oo khadka dhexe ka ciyaari lahaa uu wax badan ka qaban lahaa kubbadaha ku socday goolka Arsenal, isla markaana uu si fiican ula shaqayn lahaa Gabriel.
Tony Adams oo kabtan u ahaan jiray Arsenal, ayaa yidhi: “Waxay ila tahay in la joogo waqtigii afarta dambe. Waxa aan sidan sheegayay tan iyo bilowgii xili ciyaareedka. Waxaad ku guuleysan karaysaan kulamada koobabka, laakiin wax guul ah kuma keenaysaan kulamada horyaalka, waana haddii la rabo in mustaqbalka loo dhiso kooxda.
“Waxay ila tahay in Hector ay dhibaato ka jirto, qaab difaacistiisuna maanta (shalay) ma ahayn mid wanaagsan. Laakiin waxa aan jeclaan lahaa inuu afarta dambe ku laabto. Waxaad hadda heshay Gabriel, usoo hel laacib ka garab ciyaara.
“Waxay hadda Arsenal u muuqataa inay heleen dhex dambe, waa se inay isku dhisaan mustaqbalka.”
Goolka ay Manchester City ka dhalisay Arsenal ee Guardiola guusha siiyey ayuu Tony Adams ku eedeeyey in qaladkiisa ay lahaayeen Hector Bellerin iyo Bernd Leno.
Abdiwahab Ahmed 220 posts
Bruno Fernandes Oo Qirtay Inuu Qalad Sameeyey Markii Uu
Guinea votes in tense elections as ruler seeks a 3rd time period
Former President Pierre Buyoya Condemns “Political…
Jabuuti oo shacabkeeda uga digtay jebinta xayiraadda ay…
Jabuuti oo shacabkeeda uga digtay…
Golaha Shacabka BFS oo maanta u…
Former President Pierre Buyoya Condemns…